Usoro Nzuzo Mgbasa Ozi (CN)
Ònye ka anyị bụ na ihe bụ nzube nke iwu nzuzo a?
Usoro iwu nzuzo a na-akọwa otú MH Industry ("MH", "anyị" ma ọ bụ "anyị") si eji ma chebe ozi nkeonwe ị nyere anyị mgbe ị na-eji saịtị weebụ a.
Ozi nkeonwe bụ ozi nke nwere ike ịmata gị dịka onye dị ndụ, ma ọ bụ n'onwe ya ma ọ bụ mgbe ejiri ya na ozi ndị ọzọ anyị jide ma ọ bụ nwere ike ijide. Iwu nzuzo a na-akọwa otú anyị si eji ma chekwaa ozi nkeonwe anyị na-anakọta n'aka gị mgbe ị na-eji saịtị weebụ a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iwu nzuzo a ma ọ bụ ojiji nke ozi nkeonwe gị biko kpọtụrụ anyị. Biko gaa na ngalaba "Otu esi akpọtụrụ anyị" n'okpuru. N'akụkụ ahụ, anyị debere adreesị ụlọ ọrụ anyị, aha nọmba ekwentị anyị na adreesị ozi-e anyị.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ na iwu nzuzo a?
Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na ozi nkeonwe gị nke a na-eji ya na iwu nzuzo a, ị ga-ezere iji weebụsaịtị a ozugbo. Biko mara na ị gaghị enwe ike ịzụta ngwongwo ma ọ bụ ọrụ n'aka anyị site na ebe nrụọrụ weebụ a ma ọ bụrụ na i nyeghị anyị ụfọdụ ozi onwe anyị ka i wee deba aha gị iji jiri ebe nrụọrụ weebụ a wee ka anyị nwee ike ịhazi usoro gị.
Kedu banyere mmelite nke iwu nzuzo a?
Anyị nwere ike ịgbanwe iwu nzuzo a site n'oge ruo n'oge site na imelite ibe a. Ị ga-enyocha ibe a mgbe niile. A nọgidere na-eji saịtị weebụ a mgbe a gbanwere mgbanwe a na iwu nzuzo a iji gosi na ị gụọ ma kweta mgbanwe ọ bụla. I kwesịghị iji weebụsaịtị a ma ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ na mgbanwe ọ bụla na iwu nzuzo a na ị ga-agwa anyị ma mgbanwe ndị ahụ ọ pụtara na ị nwekwaghị obi ụtọ na ụzọ anyị si eji data nkeonwe gị.
Kedu ozi onwe onye anyị na-anakọta?
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ahịa anyị (nke a gụnyere ma ndị ahịa na ndị ahịa) ma ọ bụrụ na ị debanye aha iji ụfọdụ ibe weebụ a gụnyere (dịka ọmụmaatụ) iji zụta ngwongwo na ọrụ n'aka anyị, anyị ga-enye gị ohere ịnweta peeji ndị ahụ . Anyị nwere ike ịnakọta ozi nkeonwe sitere n'aka gị dịka akụkụ nke usoro ndebanye aha ahụ; dịka akụkụ nke usoro nhazi nke ịntanetị; na iji nweta nkwenye gị iji kwe ka ahịa zitere gị ozugbo. Ozi nkeonwe anyị na - anakọta n'aka gị nwere ike ịgụnye:
aha gị, ụbọchị ọmụmụ na ozi kọntaktị (dịka adreesị ozi-e na adreesị ozi-e (s) na nọmba ekwentị (s));
ozi gbasara ahụmịhe gị na ngwaahịa na ọrụ anyị;
gị NJ ọrụ njirimara gị (nke Ndị uwe ga-enye gị) na paswọọdụ gị (nke ị ga-ebuli). A ga-agwa gị ka ị nye gị ID na paswọọdụ gị mgbe ọ bụla ị nbanye iji saịtị a);
ihe ịchọrọ ịchọta ahịa gị na nkwekọrịta gị (biko gaa na ngalaba "Direct Marketing" n'okpuru maka ozi ndị ọzọ);
nkọwa ego gị / debit card; ma
(n'ihe gbasara ahịa ahịa naanị) nkọwa gbasara azụmahịa gị na arụmọrụ ya, nke nwere ike ịgụnye ụfọdụ ozi nkeonwe.
Ndepụta a anaghị agwụ ike ma enwere ike imelite ya n'ọdịnihu. Ọ bụ echiche ziri ezi nke ụfọdụ ozi onwe onye anyị nwere ike ịnakọta ugbu a n'aka gị.
Kedu ihe anyị na-eme na ozi nkeonwe anyị na-anakọta?
Anyị ga-eji ozi gbasara gị maka atụmatụ achụmnta ego ziri ezi, dịka ọmụmaatụ:
iji webata weebụsaịtị a na nkwekọrịta anyị ma ọ bụ mmekọrịta ọzọ gị na ya, gụnyere iji nye anyị ngwaahịa na ọrụ anyị;
iji nyochaa ụzọ i si eji weebụsaịtị a iji mee ka ngwaahịa na ọrụ anyị na-enye na ọrụ ahịa na mgbasa ozi anyị na maka ọrụ nyocha ahịa na-eme ka ọ dịwanye mma (anyị nwere ike ịkpọtụrụ onwe anyị maka nzube a maọbụ jụọ ndị ọzọ ime ya na nnọchite anyị - biko gaa na ngalaba "Ònye ka anyị na-ekerịta ozi a na" n'okpuru);
iji mesoo na ịzaghachi nkwurịta okwu ọ bụla, ajụjụ ma ọ bụ ngwa nke ị na-edo onwe anyị n'okpuru anyị;
iji zitere gị ahịa ahịa gbasara ngwaahịa na ọrụ anyị (mana naanị mgbe ị na-enye nkwenye kwesịrị ekwesị iji kwe ka nke a - biko rụtụ aka na ngalaba "Direct Marketing" n'okpuru); ma
iji rube isi n'iwu, usoro iwu na ọrụ ndị ọzọ dị mma gọọmentị.
Ndepụta a anaghị agwụ ike ma enwere ike imelite ya n'ọdịnihu. Ọ bụ echiche ziri ezi nke ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị dị ugbu a nke anyị nwere ike iji ozi gbasara gị anakọtara site na ebe nrụọrụ weebụ a.
Ònye ka anyị na-ekerịta ozi nkeonwe gị?
Ewezuga dị ka akọwapụtara n'okpuru, anyị agaghị ebufe, kpughe, ree, kesaa ma ọ bụ weghaara ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ (nke pụtara onye ọ bụla ma ọ bụ nzukọ) ọ gwụla ma enwere ikikere ma ọ bụ na-enye gị ohere igosipụta ya site na iwu ma ọ bụ usoro iwu.
Anyị nwere ike irere onye ọzọ ma ọ bụ nzukọ gị ozi nkeonwe dị mkpa dịka akụkụ nke usoro azụmahịa anyị (dịka na ọ bụrụ na njikwa anyị ma ọ bụ nlekọta ga-ewepụ ya). Anyị kwesịrị ime nke a, anyị ga-ahụ na e mezuru ya dịka Iwu ahụ si dị.
Iwu ma ọ bụ usoro iwu ga - achọ ka ị hapụ ozi gbasara gị na ndị ọrụ iwu (dịka ụlọikpe, ikpe, ndị uweojii ma ọ bụ ọrụ nchekwa). Iji nọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke weebụsaịtị a ma chebe ọdịmma nke ndị ahịa ya na ndị debanyere aha anyị, anyị ga-agbaso ihe ọ bụla dị otú ahụ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịchọrọ igosipụta ozi nkeonwe gị nye ndị ọchịchị maka ụtụ isi ma ọ bụ nzube ndị ọzọ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, anyị nwekwara ike ikpebi na e nwere ezi ihe mere anyị ga-eji kpughee ozi nkeonwe gị n'aka ndị uwe ojii nakwa na nkwupụta ga-eme ka iwu kwadoro na iwu kwadoro n'okpuru Iwu ahụ.
Ozi nkeonwe gị nwere ike ịfe ma jiri nke ọ bụla ụlọ ọrụ dị na MH otu, ụfọdụ n'ime ha dị na China. Anyị ga-eziga ozi nkeonwe gị na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye ha ohere ịhazi ya iji nye anyị ọrụ.
Tụkwasị na nke ahụ, enwere ike ịnwe ọnọdụ ọ ga-adị mkpa ka anyị kpughee ozi nkeonwe gị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ òtù dị iche iche iji chebe ndị ahịa anyị ma ọ bụ mmasị anyị. A ga-ekwe ka nkwupụta dị otú ahụ dị n'okpuru Iwu ahụ ma ọ bụrụhaala na ha dị mkpa iji chekwaa ọdịmma ndị ahụ ma bụrụ ndị na-eburu n'uche ihe gbasara ọdịmma gị.
A ga-ebufe ozi nkeonwe gị n'èzí China?
Anyị nwere ike ịhazi data anyị na-anakọta n'aka gị site na ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'èzí China nke na-arụ ọrụ maka anyị ma ọ bụ otu n'ime ndị ọrụ anyị. Ndị ọrụ dị otú ahụ nwere ike ịmekọrịta, n'etiti ihe ndị ọzọ, ijide data nkeonwe gị, mmezu nke iwu, nhazi ma ọ bụ nkọwa ịkwụ ụgwọ gị na inye ọrụ nkwado. Site na ịnye data gị onwe gị, ị kwenyere na nnyefe a, ịchekwa ma ọ bụ nhazi. Anyị ga-eme ihe niile dị mkpa iji hụ na a na-emeso data gị n'enweghị nsogbu na dịka iwu nzuzo a dị.
Ebee ka anyị nyere gị (ma ọ bụ ebe ị họọrọ) paswọọdụ nke nyere gị ohere ịnweta akụkụ ụfọdụ nke saịtị anyị, ọ bụ ọrụ gị maka idebe paswọọdụ a. Anyị na-arịọ gị ka ị ghara ịkọrọ onye ọ bụla paswọọdụ.
N'ụzọ dị mwute, ịnyefe ozi site na ịntanetị adịghị echebe ya. Ọ bụ ezie na anyị ga-eme ike anyị niile iji chekwaa data nkeonwe gị, anyị enweghị ike ikwu na nchekwa nke data gị na-ebute na saịtị anyị; nnyefe ọ bụla dị na ihe ize ndụ gị. Ozugbo anyị natara ozi gị, anyị ga-eji usoro siri ike na atụmatụ nchekwa iji gbalịa igbochi ịnweta ohere n'enweghị ikike.
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ị na-eji saịtị weebụ a n'èzí China?
Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị weebụ a na-abụghị China, iwu ndị ọzọ nwere ike itinye n'ọrụ nhazi nke ozi gbasara gị. Anyị na-arụ ọrụ a site na China. Anyị anaghị agbaso iwu obodo gị na iwu nzuzo a nwere ike ọ gaghị akwado iwu ndị ahụ. I kwesịghị ịnyefe anyị ozi nkeonwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ na ọnọdụ a.
Kedu banyere ozi a na-edeghị aha?
Anyị nwekwara ike iji ma gosipụta ozi na nchịkọta (ntụgharị ka ndị ahịa ọ bụla ghara ịmata) maka ahia na atụmatụ mmepe. Ozi ahụ agaghị abụ ozi gbasara gị n'ihi na ị gaghị amata ma ọ bụ amata ya. Nke a pụtara na ọ bụghị iwu nzuzo a ma ọ bụ Iwu ahụ ga-etinye.
Kedu ka anyị si echebe ozi gbasara gị?
Iji gbochie ịnweta ma ọ bụ nkwupute n'enweghị ikike ma ọ bụ nkwupụta, mmebi ma ọ bụ nkwụsị nke ozi nkeonwe gị, anyị na-ewere usoro nke anụ ahụ na nke kọmputa, usoro nhazi na ọrụ nhazi na njedebe a, dịka ọrụ anyị dị n'okpuru Iwu ahụ. Nke a nwere ike ịgụnye ntinye nzuzo (dịka ọmụmaatụ, ebe nrụọrụ weebụ a bụ saịtị na-echekwa ma nyefee na saịtị a ga-ezoro ezo).
Ị na-ahụ maka ịnọgide na-enwe nzuzo nke ID na paswọọdụ gị nke metụtara njikọ gị na ibe ụfọdụ nke ibe weebụ a na / ma ọ bụ akaụntụ ọ bụla i setịpụụrụ anyị. Ị kwenyere ịnakwere ibu ọrụ maka ihe omume niile na-emetụta na otu aka ahụ. Ikwesighi ikwe ka ndi ozo jiri ID ma obu okwuntughe gi. Biko kpọtụrụ anyị ngwa ngwa iji nkọwa dị na ngalaba "Otu esi akpọtụrụ anyị" n'okpuru ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ID ma ọ bụ paswọọdụ gị nwere ike imebi. Anyị agaghị abara gị uru ma ọ bụrụ na ịnwetaghị nkọwa nbanye gị ma ọ bụ ọrụ a na-enweghị ikike na saịtị weebụ a n'enweghị ikike iji nweta ihe ndekọ gị na-eme ka onye ọzọ mara ya, ọ gwụla ma nke a bụ n'ihi nleghara anya anyị.
N'agbanyeghị mgbalị anyị maka nchekwa, ọ dị mkpa iburu n'uche na ịntanetị abụghị ụzọ nchebe nke nkwurịta okwu. Ozi ndị mmadụ na-enweta site n'Ịntanet nwere ike ịbanye na ndị ọzọ. Anyị enweghị ike ikwe nkwa nchekwa nke ozi nkeonwe zitere anyị site na ebe nrụọrụ weebụ a. Ị na-anabata na ị na-eji saịtị weebụ a n'ihe ize ndụ gị.
Enweghị ike iji weebụsaịtị a mee ihe maka ụmụaka site na afọ 13 ma dị ka ndị dị otú ahụ, anyị rịọrọ ka ụmụaka nọ n'okpuru afọ 13 nyeghị anyị ozi ọ bụla gbasara anyị site na ebe nrụọrụ weebụ a. Anyị na-akwado ka ndị nne na nna na ndị nlekọta na-echetara ụmụ ha ka ha jiri aka ha na-eji data ha eme ihe na nzuzo.
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ. Na mgbakwunye, weebụsaịtị ndị ọzọ anyị na-achị nwere ike jikọta na weebụsaịtị a. Anyị enweghị ọrụ maka omume nzuzo na ọdịnaya nke weebụsaịtị ndị ọzọ. Ikwesiri ịkpachara anya ma leba anya na nkwuputa nzuzo nke bara uru na weebụsaịtị a.
Anyị nwere ike iji "kuki" na weebụsaịtị anyị. Kuki bụ faịlụ data na-echekwa ozi na draịvụ ike gị ma ọ bụ ihe nchọgharị nke pụtara na ebe nrụọrụ weebụ anyị nwere ike ịchọpụta na ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị na mbụ. Ha na-eme ka ọ dịkwuoro gị mfe ịnọgide na-enwe mmasị gị na weebụsaịtị a, na site n'ịhụ otú i si eji weebụ eme ihe, anyị nwere ike ịkwado ya na mmasị gị ma tụọ ya iji ya.
Ị nwere ike, ọ bụrụ na ị họrọ, gbanyụọ kuki na ihe nchọgharị gị wee hichapụ kuki niile echekwara na kọmputa gị. Na Microsoft Internet Explorer, a ga-eme nke a site na ịhọrọ 'Ngwaọrụ / Nhọrọ Ịntanetị' ma nyochaa ntọala nzuzo gị ma ọ bụ họrọ 'kuki kuki'.
Ị nwere ike ịchọpụta otu esi eme nke a maka ihe nchọgharị gị site na ịpị 'enyemaka' na menu nchọgharị gị. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime atụmatụ weebụ anyị agaghị arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ kuki.
Anyị nwekwara ike iji ihe eletrọniki mara dịka "mgbama weebụ" na weebụsaịtị a yana na nkwukọrịta sitere na iji na / ma ọ bụ ịdenye na ebe nrụọrụ weebụ a, dịka ozi-e nkwado. Mgbama weebụ na-arụkarị ọrụ na kuki na ha na-eji maka ebumnuche ndị ahụ.
Anyị etinyela ndepụta zuru oke nke kuki eji na mh-chine.com n'okpuru, tinyere nkọwa nke ihe kuki eji. Ndị uwe anaghị eji kuki iji nakọta ozi gbasara onwe gị gbasara gị.
mh-chine.com na-eji Google Analytics, ọrụ nchịkọta weebụ nke Google nyere, Inc. Google Analytics setịpụrụ kuki iji nyochaa iji anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị na ikpokọta akụkọ na ọrụ onye ọrụ.
Google na-echekwa ozi anakọtara kuki na sava na United States. Google nwere ike ịnyefee ozi a gaa na ndị ọzọ ebe iwu chọrọ ka ịme ya, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ ndị ọzọ na-eme ihe ọmụma na Google. Google agaghị ejikọta adreesị IP gị na Google ọ bụla data. Site n'iji mh-chine.com, ị kwenyere nhazi data banyere gị site na Google na ụzọ na maka ebumnuche ndị e depụtara n'elu.
mh-chine.com na-eji ọtụtụ ndị na-eweta ngwaahịa na-edozi kuki na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka nnọchite anyị iji nyefee ọrụ ha na-enye. Ndepụta nke kuki ndị ọzọ na-eji na mh-chine.com na ihe ọ bụla ejiri mee ihe na-egosi n'okpuru ebe a.
Imelite ma nweta ohere na ma ọ bụ mbipụta nke ozi nkeonwe gị
Ọ bụrụ na ozi nkeonwe nke ị nyere anyị anaghị adị ma ọ bụ na-ezighị ezi, biko mee ka anyị mara site na ịkpọtụrụ anyị site na ozi-e ma ọ bụ site n'iji nkọwa dị na ngalaba "Otu esi akpọtụrụ anyị" n'okpuru.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ohere ma ọ bụ mbipụta ozi nkeonwe anyị jidere gbasara gị biko kpọtụrụ anyị n'otu ụzọ ahụ.
Ọ bụrụ na enwere ike iji ozi nkeonwe gị maka ebumnuche ahịa ahịa kpọmkwem, anyị ga-eme ka o doo anya na ibe dị na ibe weebụ a. N'otu oge ahụ, anyị ga-achọ nkwenye gị ịnweta ahịa ziri ezi ma ọ bụ anyị ga-ahapụ gị ka ịpụ apụ na ịnweta nke a (dabere na ihe achọrọ n'okpuru iwu ndị dị).
Na ahia ziri ezi zitere site na telifon ma ọ bụ site na e-mail, SMS, ozi olu ma ọ bụ ụzọ ọ bụla ọzọ nke kọmputa anyị ga-esi nye gị ụzọ dị mfe ịjụ ịjụ ahịa ahịa ọzọ site na usoro dị mkpa. Ọ bụrụ na ị jụ ahịa ahịa eletrik ọzọ, anyị agaghị ewepụ ozi gbasara gị site na nchekwa data (s) mana ozugbo o kwere omume, anyị ga-achọpụta na ị gbanwere obi gị. Nke a pụtara na anyị nwere ike ịnọgide na-ejide ozi nkeonwe gị (gụnyere nkọwa kọntaktị gị) na ụdị mpempe akwụkwọ, iji hụ na anyị anaghị akpọtụrụ gị.
Ọ bụrụ na oge ọ bụla ịchọrọ ịgbanwe obi gị banyere ịnweta ahịa nke ọma ị nwere ike ịpụ apụ n'oge ọ bụla. Ị ga-eme nke a ma ọ bụ site na ịmegharị mmasị gị site na ebe nrụọrụ weebụ a ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị site na ozi-e ma ọ bụ biputere iji nkọwa dị na mpaghara "Otu esi akpọtụrụ anyị" n'okpuru.
Nkwụsị nke akaụntụ gị na njigide nke ozi nkeonwe gị
Dịka Iwu ahụ si dị, anyị ga-eme ka ozi gị ghara ịdị ogologo oge karịa ka ọ dị mkpa iji nweta nzube (s) anyị ma ọ bụ site n'aka ndị ọzọ ọ bụla na-edozi ya maka nnọchite anyị.
Anyị debere ikike ịjụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị akaụntụ gị na-enweghị ọkwa.
Ọ bụrụ na anyị mechie akaụntụ gị maọbụ ma ọ bụrụ na ị kagburu akaụntụ gị, anyị ga-emechi ya ngwa ngwa dịka o kwere mee ma gaebe ozi nkeonwe gị mgbe nke ahụ gasịrị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. Mgbe oge ahụ gasịrị, a ga-ewepụ ma ọ bụ ehichapụ ozi gbasara gị na nchekwa data anyị.
Na ịnweta ozi
Iwu ahụ nyere gị ohere ịnweta ozi achọrọ banyere gị. Enwere ike ime ka ikike ị nweta gị dịka iwu ahụ si dị. Enwere ike ịnweta arịrịọ ọ bụla iji nweta ego nke £ 10 iji kwụọ ụgwọ anyị na-enye gị nkọwa nke ozi anyị nwere banyere gị.